आवरणFebruary 13, 2020
ललितपुर । जैविक प्रविधिको उन्नयनका लागि भन्दै बायोटेक्नोलजी सोसाइटी अफ नेपालले एक दिने अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेको छ । उक्त गोष्ठीमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्टका सचिव डा महेशकुमार अधिकारीले बायोटेक्नोलजी विकासमा नास्ट लागि परेको बताएका छन् ।
‘संस्कृत वाङमयमा पनि डीएनएको बारेमा उल्लेख छ, तर त्यहाँ उल्लेख गरिएको डीएन र आधुनिक प्रविधिको माध्यमले देखाएको भन्दा अलि फरक छ,’ कार्यक्रममा डा अधिकारीले भने, ‘नेपालमा जैविक प्रविधिको महत्व झनै छ , यस क्षेत्रमा अगाडि बढ्न नास्ट क्रियाशिल छ ।’
च्याउविद्समेत रहेका डा. अधिकारीले बायोटेक्नोलजीको क्षेत्रमा नेपालमै अनुसन्धान गर्न सके मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, तर प्रयाप्त योजना तथा रकम अभावका कारण सोक्षेत्रमा अनुसन्धान अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनसँगै अनुवांसिक कुरा पनि फरक पर्दै जानेछ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘यसकारण अहिलेदेखि नै अनुसन्धानमा अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’ नास्ट वातावरण बनाउन तयार छ उनले भने ।
गोष्ठीमा म्याक्स प्यांक इन्स्च्टीट्यूट अफ् डेभलपमेन्टल बायोलजीका डा. स्टीनी स्वार्टले मुख्य प्रवचन दिएका थिए । प्रवचनका क्रममा जैविक प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वमा भैरहेका अतिसुक्ष्म कोषिकाहरुमा भएको अनुसन्धानमा व्याख्या गरेका थिए ।
त्यसैगरि पोर्चुगल, स्विजरल्याण्ड र नेपालका जैविकप्रविधिका क्षेत्रका अनुसन्धानकर्मीहरुले मौखिक प्रस्तुती दिएका थिए । यसले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई जैविक प्रविधिको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने अनुसन्धानको बारेमा जानकारी हासिल गरेको सोसाइटीका अध्यक्ष नविननारायण मुनंकर्मीले बताए ।